Nhau - Tsvaga yakanaka badminton yekudzidzisa muchina ?
Tsvaga yakanaka badminton yekudzidzisa muchina?
Kupitenga badminton shuttlecock kudzidzisa muchina ?
Parizvino vanhu vakawanda kubva kumativi ose enyika vanofarira kutamba badminton.Sezvo kutamba badminton kune zvakawanda zvinobatsira.
Zvakanakira kutamba badminton ndezvekushandisa akawandisa macalories mumuviri uye kubatsira kuderedza uremu.Panguva imwecheteyo, inogonawo kubvisa kusagadzikana kwekervical uye kugadzirisa maziso.Kudzidzira badminton zvakanyanya kunogona zvakare kushandisa kudzora wega uye kutsungirira.
Kutamba badminton kunofanirwa kuve nevatambi vekutamba, kana iwe usingawane wekutamba naye, zvekuita?
Parizvino pamusika, pane chigadzirwa chikuru:badminton yekudzidzira kupfura muchinakugadzirisa kutamba shuttlecock chete.Haufanire kutsvaga mumwe munhu wekutamba newe, kunyangwe uri wega, kana uinesiboasi badminton yekudyisa muchina, ipapo waigona kunakidzwa nokudzidziswa kwako uri woga bedzi .
ForSiboasi badminton vachitamba shamwari michina, kune mhando dzakasiyana dzemutengo wakasiyana sezvo dziri mumagadzirirwo akasiyana uye mabasa.Siboasi ndiye anogadzira zvakananga kune ayobadminton michina, ivo vakagadzira uye vakatengesa zvakananga kune badminton vatambi.Neanopfuura makore 16 mukatibhora rekupfura muchina, parizvino ine vatengi vanobva pasirese pasirese, uye pari zvino vachiri kuendesa kune vatengi vepasirese mazuva ese.Kubva pane izvi, aigona kuona mhando yakadarobadminton shuttlecock kudzidzisa midziyoinobatsira chaizvo vatengi , saka vava kunyanya kufarirwa pamusika .
Pano suma zvinopisasiboasi shuttlecock feeding machinemuenzaniso -Siboasi S4025:
Iyo yepamusoro uye inopisa modhi makore ese aya mumusika wepasi rose, inowana mukurumbira wayo wakanaka kubva kune vatengi;
Inokodzera kushandiswa kwemunhu, makirabhu, zvikoro nezvimwe;
Iine bhatiri rechargeable: kuchaja kwese kwakazara (anenge maawa gumi), kunogona kugara kwemaawa mana;
Zvakare neAC simba: Simba remagetsi — kana bhatiri risipo, rinogona kushandisa simba reAC;
Iine smart remote control: iri nyore kwazvo kushanda, uye iri nyore kwazvo;
Big shuttle holder: inogona kunge iine 180-200 shuttles -hapana chikonzero chekutora shuttles nguva zhinji, inogona kunakidzwa nekutamba / kudzidziswa zvakanyanya;
Ne self-programming basa: inogona kugadzirisa nzvimbo yakasiyana yekupfura yaunoda;
Mabasa akaita se: 6 marudzi emuchinjiko bhora, yakatarwa poindi bhora, random bhora, rakamira bhora, rakachinjika bhora etc;
Iine mavhiri anofamba: anogona nyore kufamba-famba mudare;